Kanjani ukuba ngibheme izinhlanzi ekhaya: ezimbili kadokotela
Uma fan of izinhlanzi ezomisiwe, musa ukusheshe ukuya emakethe ingxenye elandelayo. Imikhiqizo emashalofini kungukuthi njalo libhekene freshness ngokugcinwa ubuchwepheshe ukukhiqizwa. Ukuze uzame futhi okuqinisekisiwe okumnandi izinhlanzi fresh, kubalulekile kuphela ukwazi ukuthi ngibheme izinhlanzi ekhaya. Phela, akusiwona kanzima. Cabangela izindlela ethandwa kakhulu.
kudingeka izithako ezilandelayo ukupheka mackerel endlini elimnandi:
mackerel fresh, 2 PC;
intuthu ketshezi, 100 ml;
onion ikhasi, 2-3 izandla;
umfire, amayunithi 2;
Ukwazi kanjani ukuba ngibheme izinhlanzi ekhaya, lezi izithako ingatholakala emangalisayo mackerel elimnandi. Ngakho, u-anyanisi ikhasi kumele kahle siyakazwe ngamanzi bese uthele. Engeza ushukela nosawoti bese ushiye ibila. Umhluzi kufanele ubilise imizuzu engu-20. Khona-ke kubalulekile sokukhipha, engeza intuthu ketshezi, iqabunga bay futhi ushiye ngesivalo Friend ivaliwe for isigamu sehora, ukuze ikhofi ngokomfanekiso umhluzi. Emva kwalesi sikhathi, i-bay leaf GAT bese wengeza ebhodweni okulungiselelwe mackerel. inhlanzi kulolo ketshezi kufanele selehlile ekamelweni lokushisa, bese uthumela liphole esiqandisini izinsuku ezimbili. Kufanele kukhunjulwe ukuthi mackerel kufanele ngezikhathi ukuvula ngokulinganayo ukusabalalisa marinade. Ngemva kwezinsuku ezimbili, inhlanzi mnandi futhi esihlwabusayo usulungile.
Kanjani ukuba ngibheme izinhlanzi ekhaya?
Inguqulo yangaphambilini kwaba inguqulo lula ukulungiswa mackerel ngibhema, ngakho-elibizwa abandayo ukubhema zezinhlanzi ekhaya. Yize kunjalo, uma fan of ngibhema ke akusona isithiyo ekulungiseleleni indlu izinhlanzi. Badinga kuphela ukwakha Smokehouse, elingasebenza njengesibuko isisekelo sokuthethelela emgqonyeni metal. Ngaphezu kwalokho, ukubhema akunakwenzeka ngaphandle sawdust. ngezisebenzi abakwaziyo ukuba ngibheme izinhlanzi ekhaya, kululekwa ukusebenzisa nanoma imuphi umuntu ngaphandle sawdust AmaConifers ngenxa resin yabo elimnandi ikhishwe. Inketho engcono - sawdust of birch noma Alder. Fish ukubhema enjalo angasebenzisa noma ukunambitheka yakho. Ngakho ukubhema hot ekhaya kusikisela ukuba khona izithako ezilandelayo:
Izikebhe zokuyithambisa inhlanzi;
Ngakho, kufanele izinhlanzi bahlanza ngokucophelela futhi pre-kulolo ketshezi e isinongo. I Smokehouse uthele sawdust nenhlanzi uphawu esegridini ekhethekile. inhlanzi ezincane kungaba abheme lonke, hhayi gutting. Okukhulu kungenzeka pre-ukugcwalisa imifino okubabayo. Ngaphansi Smokehouse wenze umlilo futhi ubukele lokushisa ngokucophelela. Ngakho, inhlanzi yokuqala kufanele kube elomile ezingeni lokushisa aphansi, bese ngqo amaCopt. Hlola izinga lokushisa kwe-Smokehouse Kulula ngokwanele - udinga ukulahla amanzi ekhaveni. Uma thumba - kusho ukufudumeza esikhulu kanye nezindleko kancane ukwehlisa izinga lokushisa. inqubo ukubhema angase athathe imizuzu 40 amahora ambalwa, kuya izinhlanzi kanye ukushisa Smokehouse. Ekuqaleni, isidingo ukususa izinhlanzi kanye ngezikhathi zama, kodwa-ke, uma kakade, khumbula kuhle kanjani ukuba ngibheme izinhlanzi ekhaya, konke kuyoba lula kakhulu futhi ngokushesha.
Bean izaqheqhe: zokupheka, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka